Ahoana ny fomba fihazakazahana fifaninanana Facebook (dingana-by-dingana) | Martech Zone
Ahoana ny fomba fihazakazahana fifaninanana Facebook (dingana-by-dingana)
Talata, Desambra 17, 2019 Talata, Desambra 17, 2019 Douglas Karr
Fitaovana varotra ambanin-javatra ny fifaninanana Facebook. Izy ireo dia afaka manaitra ny fahatsiarovan-marika, ho lasa loharanon'ny atiny ateraky ny mpampiasa, hampitombo ny firotsahan'ny mpihaino ary hanisy fiovana miavaka amin'ny fiovanao.
Running a fifaninanana haino aman-jery sosialy mahomby Tsy asa sarotra. Saingy mila ny fahazoana ny sehatra, ny lalàna, ny mpihaino anao ary ny fanaovana drafitra mivaingana.
Toa ezaka be loatra ve ny valisoa?
Ny fifaninanana voalamina tsara sy tanterahina tsara dia mety hahagaga amin'ny marika iray.
Raha liana amin'ny fanaovana fifaninanana Facebook ianao dia ity misy torolàlana iray tsikelikely amin'ny fomba fanaovana fampielezan-kevitra mahomby.
Dingana 1: manapa-kevitra amin'ny tanjonao
Na dia matanjaka aza ny fifaninanana Facebook, ny manapa-kevitra amin'izay tena tadiavinao amin'ny fifaninanana dia hanampy anao tsy hiditra amin'ny fomba hisoratan'ny mpandray anjara, inona ny loka homena, ary ny fomba fanarahana aorian'ny fampielezana.
Ny tanjona samihafa dia mety ahitana:
Mampitombo ny tsy fivadihan'ny mpanjifa
Fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokala
Fitarihana bebe kokoa
Varotra bebe kokoa
Fampiroboroboana ny hetsika
Fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika
Mpanaraka haino aman-jery sosialy bebe kokoa
Namboarina tsara Fifaninanana Facebook afaka manampy anao hahatratra lasibatra mihoatra ny iray, fa tsara foana ny manana hevitra voalohany ao an-tsaina alohan'ny hanombohana ny fampielezan-kevitra.
Rehefa miasa amin'ny zavatra hafa rehetra ianao - ny fomba fidirana, ny lalàna, ny endrika, ny loka, ny kopia eo amin'ny pejy - tadidio hatrany ny tanjonao farany ary ampifanaraho amin'izany.
Dingana 2: Atsaharo ny antsipiriany! Mpihaino kendrena, teti-bola, fotoana.
Ny devoly dia amin'ny antsipiriany raha ny momba ny famolavolana fifaninanana.
Na tsara toy inona aza ny lokao na ohatrinona ny teti-bolanao, raha tsy mieritreritra ireo fototra iorenanao ianao dia mety handany fotoana be izany.
Mametraha a teti-bola tsy ho an'ny lokao fotsiny, fa amin'ny fotoana laninao handaniana azy, ny habetsaky ny vola laninao amin'ny fampiroboroboana azy (satria mila fampiroboroboana izany mba hamoahana ny teny), sy ireo fitaovana na serivisy an-tserasera azonao ' Hampiasaiko hanampy.
fotoana no lakile.
Amin'ny ankapobeny, ireo fifaninanana izay mihazakazaka latsaky ny herinandro dia tsy mirona amin'ny hahatratra ny fara-fahaizany farany alohan'ny hifaranany. Ny fifaninanana maharitra roa volana dia mirongatra ary lasa tsy liana na manadino ireo mpanaraka.
Amin'ny fitsipika ankapobeny, dia matetika izahay no mamporisika ny hanao fifaninanana mandritra ny 6 herinandro na 45 andro. Toa izany no toerana mamy eo amin'ny famelana ny olona hiditra ary tsy mamela ny fifaninanana hidoboka na hiala liana.
Farany, eritrereto ny maha-zava-dehibe ny vanim-potoana. Ohatra, ny fanomezana onja surf dia tsy dia mahasarika ireo miditra amin'ny maty amin'ny ririnina.
Dingana 3: ny karazana fifaninanana
Ny karazana fifaninanana isan-karazany dia mifanaraka indrindra amin'ny tanjona isan-karazany. Ohatra, mba hahazoana atiny ateraky ny mpampiasa, ny fifaninanana sary no filanao tsara indrindra.
Ho an'ny lisitry ny mailaka, sweepstakes fidirana haingana no mahomby indrindra. Raha te hampiroborobo ny firotsahana ianao dia fomba iray mahafinaritra ny mihazakazaka ny fifaninanana caption mba hahatonga ny mpihaino anao mahay indrindra hilalao miaraka amin'ny marikao.
Ho an'ny hevitra, ireto misy vitsivitsy amin'ireo karazana fifaninanana azonao atao:
Fifaninanana caption sary
Dingana 4: manapaha hevitra momba ny fomba fampidiran-dresakao
Hanan-danja tokoa izany, satria misy zavatra vitsivitsy izay mahasosotra ny mpampiasa mihoatra ny fahatsapana ho voafitaka amin'ny fifaninanana satria tsy azony ny fitsipika.
Ireo niditra an-tsokosoko dia manana ny mety hanimba ny rivo-piainana mahafinaritra amin'ny fifaninanana media sosialy, ary mety handefa risika ara-dalàna mety hitranga raha tsy voavaha tsara.
Na inona na inona fomba fampidirana na fitsipika - fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny mailaka, Fitiavana ny pejinao, fandefasana sary misy fanazavana, famaliana fanontaniana iray - ataovy izay hahazoana antoka fa voasoratra mazava tsara izy ireo ary aseho miharihary izay ahitan'ny mpandray anjara.
Manampy ihany koa izany raha fantatry ny mpampiasa ny fomba hakana ny mpandresy, sy ny andro izay antenain'izy ireo hampandrenesina azy (indrindra raha lehibe ny loka, dia hahita vondrom-piarahamonina iray ianao mety ho dodona handre fanambaràn'ny mpandresy.)
Hamarino tsara fa manaraka ny fitsipika sy ny torolàlana momba ny sehatra tsirairay ianao. Facebook dia manana mametraka fitsipika napetraka amin'ny fifaninanana sy fampiroboroboana eo amin'ny lampihazo. Ohatra, mila milaza mazava ianao fa ny ny fampiroboroboana dia tsy misy tohanan'ny mpanohana, manohana, na mitantana amin'ny Facebook.
Zahao ny fitsipika sy politika raha misy fetrany hafa, ary alao antoka fa miaraka amin'ny torolàlana farany alohan'ny hanombohana ianao.
Torohevitra haingana: Raha mila fanampiana amin'ny famoronana fitsipiky ny fifaninanana ianao dia zahao ny Wishpond's mpanamboatra lalàna mifehy ny fifaninanana maimaimpoana.
Dingana 5: safidio ny lokanao
Mety hieritreritra ianao fa ny lehibe kokoa na ny fironana ny lokao dia tsara kokoa, saingy tsy voatery ho izany.
Raha ny tena izy, dia lafo ny lokao dia vao mainka mahasarika mpampiasa izay hiditra amin'ny fifaninanana ho an'ny loka fotsiny fa tsy hiaraka amin'ny marikao aorian'ny fifaninanana.
Fa kosa, tsara kokoa ny misafidy loka mifanitsy amin'ny marika misy anao: ny vokatrao na serivisinao manokana, na ny toeram-pivarotana amin'ny fivarotana anao. Midika izany fa azo inoana fa hahazo mpandray anjara izay liana marina amin'ny zavatra atolotrao ianao.
Ohatra, raha marika hatsaran-tarehy ianao manolotra ny iPhone farany farany ho an'ny fanomezana dia azo inoana fa hahazo mpandray anjara betsaka ianao, angamba mihoatra noho ny hoe manolotra fanamorana na fakan-kevitra maimaimpoana ianao.
Fa firy amin'ireo miditra amin'ny vondrona voalohany no mety hijanona ho mpanaraka na mpamandrika rehefa tapitra ny fanomezana anao, na mety hivadika ho mpanjifa maharitra?
Mora ny variana amin'ny isa be sy loka lehibe, saingy ny fisainana stratejika no fomba tsara indrindra ahazoana tombony indrindra amin'ny fifaninanana media sosialy - ny lehibe kokoa dia tsy voatery ho tsara kokoa, fa ny fampielezan-kevitra kendrena sy feno eritreritra tsy ho very maina.
Raha te hamaky bebe kokoa amin'ny fisafidianana ny lokao dia vakio:
101 Hevitra tsara indrindra ahazoana loka amin'ny fifaninanana an-tserasera sy fifaninanana
Hevitra fanomezana mora vidy 50 azonao ampiasaina ankehitriny
Hevitra 5 momba ny loka amin'ny fifaninanana amin'ny vidiny ambany izay manohitra ny olana
Dingana 6: fampiroboroboana mialoha, fandefasana & fampiroboroboana!
Lalina drafitra marketing dia tokony hampiditra toerana hampiroboroboana ny fifaninanana.
Ho an'ny fiantraikany lehibe indrindra, ny mpanatrika dia tokony hahalala kely ny fifaninanana alohan'ny hanombohana, antenaina fa faly amin'ny fahafaha-miditra sy mandresy.
Ny hevitra momba ny fampiroboroboana mialoha dia misy:
Mandefa mailaka mailaka ho an'ireo mpamandrika
Mampiroborobo ny fifaninanana ataonao amin'ny sidebars na popup ao amin'ny tranonkalanao
Fisondrotana amin'ny fantsona media sosialy
Raha vantany vao mandeha ny fifaninanana ataonao, ny fampiroboroboana anao dia tokony hitohy hihazakazaka hatrany!
Ny mpamaky isa dia manampy amin'ny fampitomboana ny fahatsapanao maika, ary koa amin'ny fampahatsiahivana amin'ny olona ny loka sy ny sandany.
Ho an'ny hafa, vakio Fomba 7 hampiroboroboana amin'ny fomba mahomby ny fifaninanana Facebook.
Dingana 7: Raiso an-tsoratra
Toy ny zavatra rehetra, ny fomba tsara indrindra hahombiazana amin'ny fifaninanana dia ny miditra fotsiny eo dia manomboka manao azy: mianara amin'ny mpihaino anao sy ny ekipanao izay mety aminao indrindra sy izay tsy mety.
Manaova naoty momba ny fizotrany sy ireo faritra tokony hatsaraina mba tsy hamerimberinao hatrany ireo hadisoana ireo.
Ary farany, fa ny tena zava-dehibe - mifalia! Amin'ny fifaninanana tanterahina tsara dia mirotsaka an-tsehatra ny mpihaino anao ary tokony ho toy izany koa ianao. Ankafizo ireo mpanaraka vaovao anao sy isa vaovao: azonao izany!
Mahatsiaro aingam-panahy? Tsy misy farany ny karazana fifaninanana azonao tanterahina: horonan-tsary, sary, fanolorana, lozisialy ary maro hafa. Mahatsiaro aingam-panahy? Mandehana mankany amin'ny tranokala Wishpond raha mila bebe kokoa! Ny rindrambaiko marketing-n'izy ireo dia manamora ny famoronana sy fanaovana fifaninanana mahomby ary ny fanarahana ny fanadihadiana sy ny firosoana.
Tags: fifaninanana facebook